Banyere Anyị - Dingxing Hardware Electromechanical Equipment Co., Ltd.
Leopard Speed ​​bụ ọkachamara ụlọ ọrụ CNC na-emepụta ngwá ọrụ na China. The ụlọ ọrụ e guzobere na 1999. Nzube anyị na ụkpụrụ bụ ike n'ezi ihe, ọhụrụ, niile-mmeri. Anyị na-agba mbọ ịzụlite imewe nke CNC ọnwụ ngwá ọrụ mgbe niile. Ugbu a, teknụzụ anyị amalitela n'ọkwa dị elu. Site na mmụọ ịsụ ụzọ, nrụpụta agbakwunyere bara uru yana ọrụ magburu onwe ya, agụ owuru na-agawanye nke ọma azụmaahịa. Enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na ọtụtụ etiti obodo gafee mba ahụ, yana ihe karịrị ndị injinia ahịa ọkachamara 50. Companylọ ọrụ ahụ na-agbaso ụkpụrụ ndị mmadụ. Lezienụ anya maka ịzụlite talent. Anyị na-emefu ego buru ibu na ọzụzụ onwe onye kwa afọ. Ngwá ọrụ ọsọ ọsọ agụ owuru CNC bụ arụpụtaghị ihe, arụmọrụ yana ịba uru. Ihe ndi anyi meputara bu CNC End Mill, Tuning Insert For Lathe Tuning Tool, Machine Thread Tap Na Ada Ada Fit Mill Mill Holder.
Product elu àgwà na magburu onwe ọrụ, merie miri ahịa mmasị. E nwere nnukwu nkwakọba na anyị Suzhou National Hi-Tech District. Ngwaahịa zuru ezu nwere ike inyere ndị ahịa aka ịbelata nrụgide nke ngwa ahịa. Chekwaa ego na nnyefe ya. Ka ndị ahịa na-echegbu onwe.
N'ihi na-elekwasị anya, otú ọkachamara. N'ihi na ọkachamara, dị oke mma. Na-atụ anya ịkwado gị!
The ụlọ ọrụ dị na Suzhou elu-tech district. Mpaghara ụlọ nrụpụta ọkọlọtọ dị ihe dịka 3000 m². Companylọ ọrụ ahụ nwere ngalaba 6 na ndị ọrụ 60. Enwere ọtụtụ nhazi na nyocha ngwa. Zuru okè ahịa na oru nkwado ọrụ. Ngwaahịa zuru ezu nwere ike inyere ndị ahịa aka ịbelata nrụgide nke ngwa ahịa. Chekwaa ego na nnyefe ya.
Iguzosi ike n'ezi ihe: Jiri ezi obi mee ihe ziri ezi.
Win-Win: Imekọrịta ọnụ bara uru maka ọdịnihu dị mma.
Innovation: Naanị mgbe niile bụ mgbanwe.
Companylọ ọrụ ahụ na-esonye n'ọtụtụ ngosipụta gburugburu ụwa kwa afọ. Ka ọ dị ugbu a, anyị emeela nkwado ntụkwasị obi na Germany, Portugal, Russia, India, Malaysia, Mexico na ihe ndị ọzọ.